Ihe kpatara na Canlọ ọrụ Cannabis Gị Ji achọ Ndụmọdụ Gburugburu Ọchịchị - Ajụjụ
Ahịa ahịa cannabis iwu kwadoro bụ usoro dị mgbagwoju anya nke iwu na ụkpụrụ. Iwu ndị a nwere ike ịgbakọ oge ụfọdụ ụfọdụ na-ekwu,, dị ka Pennsylvania na Florida, na-enwe nsogbu iwere usoro ikikere nke ha. Ikekwe ọ bụghị ihe ijuanya na ụfọdụ n'ime nnukwu aha ndị ọka iwu guzobere na Illinois cannabis.
Anyị edeburu banyere ihe kpatara ụlọ ọrụ gị nwere ike iji chọọ cananbis ọka iwu. N'isiokwu a, anyị chọrọ ịgafe otu usoro kachasị emekọrịta nke ụlọ ọrụ dị iche iche na-eji eme ihe maka mkpa iwu ha: na-abụghị ndụmọdụ izugbe.
Gịnị bụ “Ndụmọdụ General?”
Imirikiti ụlọ ọrụ buru ibu na nke etiti nwere onye haziri dị ka “ndụmọdụ ha.” Ndụmọdụ izugbe bụ onye isi ndị ọka iwu maka ụlọ ọrụ ahụ, onye nwere nnukwu ọrụ na-ahụ maka iwu ụlọ ọrụ niile. Nke a pụtara na ha (na ndị ọrụ ha) na-edozi ihe ọ bụla- nchịkwa ụlọ ọrụ, nkwekọrịta, ọrụ, akụrụngwa ọgụgụ isi, nnabata iwu, wdg Ndụmọdụ izugbe agaghị adịkarị maka ịgba akwụkwọ; ọbụna nnukwu ụlọ ọrụ nwere nnukwu ụlọ ọrụ ọka iwu agbasaghị outsource ịgba akwụkwọ megide ụlọ ọrụ iwu na-ikpe na-ikpe. Ndụmọdụ izugbe nwekwara ike ịdabere na enyemaka nkwado iwu maka akọ na / ma ọ bụ nnukwu ọrụ, dịka nnweta nnweta ma ọ bụ nnukwu ịgba akwụkwọ kwa afọ na Seclọ ọrụ nchekwa na mgbanwe. N’aka nke ọzọ, ndụmọdụ ndụmọdụ niile na-ahụ maka ọtụtụ ọrụ ndị ọrụ ụbọchị-ọrụ, ma na-eme ihe karịrị nlekọta maka mgbe ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị iweta ụlọ ọrụ iwu ga-edozi okwu ndị pụrụ iche.
Gini bụ Ndụmọdụ Gburugburu Ọpụpụ?
Companieslọ ọrụ pere mpe ka nwere nnukwu mkpa iwu. Ọ bụ ezie na obere azụmaahịa ezinụlọ ma ọ bụ naanị onye nwe ya nwere ike ịnwe ikike iwu dị ala, ụlọ ọrụ ọ bụla nke nwere oke ego, ọkachasị ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu dị ka azụmahịa cannabis, ga na-achọ ndụmọdụ oge niile. N'otu oge, ịgbakwunye onye ọrụ dị elu dịka ndụmọdụ ndụmọdụ n'ozuzu nwere ike ịdị ọnụ, yana ị nwere ike ịchọrọ ha maka awa 5-20 kwa izu, ọ bụghị 40 zuru ezu.
Nke ahụ bụ ebe echiche nke n'èzí ndụmọdụ d ị iche iche ab ịara arụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepe emepe na-akwụ ụgwọ maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dịka ndụmọdụ ha n'obí ha. Ọ kachasị nke ụwa abụọ maka onye ọ bụla metụtara. Companylọ ọrụ ahụ na-enweta oge ọrụ, ọka iwu nwere ahụmahụ iji rụọ ọrụ ha, ọrụ iwu dị mkpa, mana ọ nweghị nsogbu ịnwe nsogbu nke ịnwe onye ọrụ oge niile dị elu. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ iwu na-enweta ndị ahịa kwụụrụ onwe ha, ebe ndị ọka iwu metụtara ya ka nwere onwe ha ịchụkwu azụmaahịa ma na-etinye aka na nka ha n'ụzọ nke naanị ụlọ ọrụ iwu kwadoro.
Ihe kpatara ụlọ ọrụ gị kwesịrị iji nweta ndụmọdụ ndụmọdụ dịpụrụ adịpụ
Iwu Iwu Ahụ Cannabis na Taxtụ Ọhụụ na-emepụta ndepụta dị ukwuu iji nweta ma jigide ọkwa gị dịka azụmaahịa cannabis akwadoro, na ikikere. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ịchọrọ na-aga n'ihu ị nwere dị ka azụmaahịa cannabis na Illinois:
N'afọ kwa afọ gbasara ọkwa ịha nhatara (410 ILCS 705 / 7-30)
Atụmatụ ọzụzụ ndị ọrụ, ndị ọrụ na ndị ọrụ:
Gbalịsie ike na ndị ọrụ gị na-agbaso iwu na omume kacha mma
Imelite omume kachasị mma kwa ụbọchị
Ọzụzụ na-ere ịre ahịa
Gburugburu ebe obibi, ahụike na nchekwa
Iwu steeti na nke gọọmentị etiti na mkpofu ahịhịa
Iji ọgwụ ahụhụ eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị
Nkwakọ ngwaahịa na akara kwesịrị ekwesị
Ijide n'aka na akụrụngwa niile na-arụ ọrụ ma na-ezute ụlọ ọrụ na / ma ọ bụ ụkpụrụ steeti
Keepingdekọ ihe ndekọ iji jide n’aka na ụlọ ọrụ gị na-edekọ nke ọma ma na-echekwa ozi niile ndị Ọchịchị chọrọ;
Nyochaa oge na ndekọ ndekọ sitere na Ọchịchị ma ọ bụ ọchịchị obodo
Nyocha kwa afọ nke niile iwu, ukpuru na iwu
Na mgbakwunye na ụkpụrụ niile nke cannabis, ụlọ ọrụ cannabis na Illinois nwere ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ metụtara iwu nke metụtara ụlọ ọrụ nwere nnukwu uru, dịka:
Governancelọ ọrụ na - achịkwa ụlọ ọrụ:
Mkpebi ụlọ ọrụ
Zụ na ire nke ụlọ ọrụ ahụ
Idozi esemokwu nchịkwa
Ndị na-achọ ọrụ na ndị na-agbapụ ọrụ
Enweghị ọrụ na nkwụsị ọrụ na-ezighi ezi
Uru ndị ọrụ, ụgwọ opekata mpe, oge ezumike, wdg.
Usoro nkwekọrịta azụmahịa:
Zụta / ree nkwekọrịta
Ya na ndi ahia, ndi n’acho ahia, ndi n’iru ha, na ndi n’iru ha
Ndị nkwekọrịta na-abụghị nke steeti
Azụmaahịa na ire ahịa
Nke a bụ ụfọdụ nnwale nke ọtụtụ nsogbu ndị iwu kwadoro na ị na-ekwe nkwa ihu dị ka onye ọchụnta ego cannabis nwere nnukwu ọchịchọ.
Echiche Ikpeazụ na ịnwe ndị na - ahụ maka ndụmọdụ nkịtị
Cannabis bụ azụmahịa siri ike, nke siri ike ma na-achịkwa nke ukwuu. N'inye ego maka oke ego na oke iwu nke iwu metụtara, yana nnukwu ụgwọ maka odida, azụmahịa ahịa cannabis kwesịrị ichesi ike na iwere onye dị ka ndụmọdụ izugbe.
Kpọtụrụ onye ọka iwu cannabis iji kwurịta nhọrọ gị wee chekwaa ogologo oge nke azụmahịa gị. Nke anyi bu ndi nwe ahia ka gi.